ဘဝမှတ်တိုင်: March 2016
One Click Root AllDevices များစွာအတွက် ကလစ်တစ်ချက်နဲ့အမှန်အကန် ပြုလုပ်ပေးမယ့် Root ဘုရင်ကြီး အသစ်ထွက်လာပါပြီ KingRoot 4.8.5 Apk
KingRoot 4.8.5 Apk အသစ်ကို KingRoot မှအသစ်ဖြန့်ချီလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ .. Android Model All Devices အမြင့် ဖုန်းတွေကို ဖုန်းထဲကနေ အလွယ်ဆုံး One Click နဲ့ Root နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး Android Device အစုံကိုလည်း Root ဖောက်နိုင်ပြီဟု ကြွေးကျော်နေတဲ့ Root ဘုရင်ကြီးကို တစ်ကယ့်လည်း လေးစားပါတယ်ဗျာ။အခုလည်း Android Device အားလုံးနီးပါးကို
ယခု ယနေ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဗားရှင်းအသစ်တွင် Root လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း KingRoot ၏ ၀က်ဆိုဒ်တွင်လုံးဝ အာမခံတာကို ဖော်ပြထားပါပြီ။ ယနေ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဗားရှင်းတွင်လည်း လုံးဝ Error ကင်းကင်းနဲ Root လုပ်လာတာတွေ တွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး Android မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို Root လုပ်ချင်တဲ့ အခါကျရင် KingRoot နဲအရင်စမ်းပြီးမှ မအောင်မြင်မှသာ အခြားသော Root Application တွေနဲ စမ်းသမ်စေချင်ပါတယ်။
KingRoot 4.8.5 Update Version အားအောက်မှာ ဒေါင်းယူရန်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/31/2016 06:40:00 am0comments
COC နှင့်ပတ်သက်တာ အကုန်လုပ်ဆောင်နုိုင်သော COC Aio Tool Android App
COC AIO Tool application
Coc tool တွေကို တစ်စုတည်းဖြစ်အောင်
coc all in one tool application ကိုရေးလိုက်တာပါ
coc myanmar font ထည့်ဖို့ရယ်
myanmar font ui ထည့်ဖို့ရယ်
Reboot button ကိုနှိပ်ပြီး
credit to all font developer
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:56:00 am0comments
COC player တွေအတွက် X-mod မလိုပဲအမြဲတမ်း Trap တွေ Bomb တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ ShowTraps Version2Apk
COC player တွေအတွက် X-mod မလိုပဲအမြဲတမ်း Trap တွေ Bomb တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့
Show Traps apk ကို version2ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီ version 2
မှာတော့ အရင်ကအကြံပြုထားကြတဲ့အတိုင်း Hidden Tesla ပါမြင်ရရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုလို့
Application ဖန်တီးသူ ကိုစိုင်းမောင် က Hidden Tesla ကိုပါမြင်ရအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။
Show Traps apk version2မရှိသေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပပြီ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:48:00 am0comments
အပြင်မှာတကယ်လေယာဉ်မောင်းနေသလို ကစားနိုင်မယ့် Real pilot flight simulator 3D
Android 2.3 and higher. v1.3
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:36:00 am0comments
ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကို မြန်မာလို့ လေ့လာနိုင်မယ့် Myanmar Health v1.1 Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကို မြန်မာလို့ လေ့လာနိုင်မယ့် Myanmar Health v1.1 Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက မိမိ ဖုန်းထဲ့ Online ရှိနေရုံလေးနဲ့
ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဆောင်ရန် /ရှောင်ရန် /သင်္ခန်းစာ မြောက်များစွာ ကို ထည့်သွင်းတဲ့ Application လေးပါ။ ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော ကျနော်တို့ လူသားတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application ဆို လုံးဝ မမှားပါဘူး။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:34:00 am0comments
ဖုန်းထဲ့ကနေ သရဲ့ ပုံပြင် မြောက်များစွာကို မြန်မာလို့ ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်မယ့် App
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ သရဲ့ ပုံပြင် မြောက်များစွာကို မြန်မာလို့ ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်မယ့် Application လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ့သရဲ့ ပုံပြင်တွေကိုမှ စိတ်ဝင်စားတယ်။ လေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တစ်ကယ်ဖြစ်ရပ် သရဲ့ ပုံပြင်တွေကို မိမိ ဖုန်းထဲမှာ Online ရှိနေရုံနဲ့ ဖုန်းထဲ့မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Android OS Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:08:00 am0comments
အလွယ်ဆုံးလေး အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမယ် နိုင်မယ့် Myanmar English Speaking v1.3 Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ အလွယ်ဆုံးလေး
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမယ် နိုင်မယ့် Myanmar English Speaking v1.3 လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးက အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ Application လေး တစ်ခုပါဗျာ။
အသုံးပြုရန် အတွက်တော့ မိမိဖုန်းမှာ Online ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပြီ မြန်မာလို့ အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ မြောက်များစွာ ပါဝင်ထားပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:06:00 am0comments
မြန်မာ လူငယ်များအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ သင်္ခန်းစာလေးတွေ ဒဿနအတွေး စာစုတွေကို စုစည်းထားတဲ့ App
ခု တင်ပေးလိုက်တာကတော့ မြန်မာ လူငယ်များအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ သင်္ခန်းစာလေးတွေကို ဒဿနအတွေး စာစုတွေကို စုစည်းထားတဲ့ Application လေး တစ်ခုပါဗျာ။ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုရန်အတွက်တော့ မိမိ ဖုန်းထဲ့မှာ Online ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာ လူငယ်များအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ ဆောင်ထားရမယ့် Application လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:05:00 am0comments
မြန်မာ အချက်အပြုတ် မျိုးစုံတွေကို ဖုန်းထဲ့မှာသေချာလေ့လာနိုင်မယ့် Myanmar Cook v1.4 Apk
အခု တင်ပေးလိုက်တာကတော့ မြန်မာအချက်အပြုတ်မျိုးစုံ တွေကို ဖုန်းထဲ့မှာသေချာလေ့လာနိုင်မယ့် Myanmar Cook v1.4 Apk လေး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအချက်အပြုတ် တွေကို သေချာ မတတ်သေးတဲ့ အိပ်ရှင်မတွေ အတွက်ရော မြန်မာအချက်အပြုတ် ဝါသနာ ရှင် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စာအုပ် ဝယ်ဖတ်စရာမလို့ပဲ့ မိမိဖုန်းထဲ့မှာ Online ရှိနေရုံလေးနဲ့ပင် မြန်မာအချက်အပြုတ်မျိုးစုံ ကို မြန်မာလို့ သင်္ခန်းစာတွေနဲ့ သေချာ လေ့လာနိုင်တဲ့ Application ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 01:02:00 am0comments
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ ပဋ္ဌန်း ၂၄ ပစ္စည်း အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ App
ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ ပဋ္ဌန်း ၂၄ ပစ္စည်း အနက်အဓိပ္ပါယ် ကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ Application လေးတစ်ခုပါဗျာ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ မြန်မာ ပဋ္ဌန်း ၂၄ ပစ္စည်း အနက်အဓိပ္ပါယ် ကို မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ Online လေး ရှိနေရုံလေးနဲ့ အလွယ်ဆုံး လေး လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင်တော့ ဆောင်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 12:58:00 am0comments
ဖုန်းထဲ့ကနေ မြန်မာ အချစ်ကဗျာများကို အလွယ်ဆုံး ဖတ်ရှုလို့ ရတဲ့ App
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ မြန်မာအချစ်ကဗျာများကို အလွယ်ဆုံး ဖတ်ရှုလို့ ရတဲ့ Application လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အချစ်ကဗျာများကို ဖတ်ရှုဖို့ မိမိဖုန်းမှာ Online ရှိထားဖို့ အရင် လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာ လူငယ် သူငယ်ချင်တွေအတွက် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 12:52:00 am0comments
ဗေဒင်ပညာ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မိမိဖုန်းထဲ့ကနေ အလွယ်ဆုံးလေး မြန်မာလို့ လေ့လာ နိုင်မယ့် App
ဒီတစ်ခါ ကျနော် တင်ပေးလိုက်တာကတော့ ဗေဒင် ဝါသနာရှင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဗေဒင်ပညာ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မိမိ ဖုန်းထဲ့ကနေ အလွယ်ဆုံးလေး မြန်မာလို့ လေ့လာ နိုင်မယ့် Application လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗေဒင် ဝါသနာရှင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တော့ အဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ Application ဆိုလည်း မမှာပါးဘူး။ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုရန် အတွက် မိမိဖုန်းထဲ့မှာ အင်တာနက် Online ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 12:48:00 am0comments
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ တရားတော်များ ကို စုစုစည်းစည်း ဖော်ပြထားတဲ့ App
ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ တရားတော်များ ကို စုစုစည်းစည်း ဖော်ပြထားတဲ့ Application တစ်ခုပါဗျာ။ မြန်မာ တရားတော်များ ကို ဖတ်ရှုရန် အတွက်တော့ အတွက်တော့ မိမိဖုန်း အင်တာနက် Online ရှိနေရုံလေးနဲ့ မြန်မာ တရားတော် အစုံကို ဖုန်းထဲ့ကနေ နာကြား ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီး။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 12:46:00 am0comments
Keyboard Style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပါတဲ့ Bagan Keyboard (Activated လုပ်ပြီးသား)
သူငယ်ချင်းတွေ အကြိုက် Keyboard Style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပါတဲ့
Bagan Keyboard လေးပါ။
အခု ကျနော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Bagan Keyboard က Activated လုပ်ပြီးသားပါ Code တောင်းစရာမလိုပါ .... စိတ်ချ စွာ ဖြင့် သုံးစွဲ့ နိုင်ပါတယ်။
Keyboard style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပါသေးတယ်.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/27/2016 12:43:00 am0comments
Board firmware တင်နည်းမှာလိုအပ်တဲ့ Save brick firmware file တွေပါ။ လိုအပ်မှု့ရှိရင်တော့ Download ရယူလိုက်ကြပါ။
C8816D Board Software (M002008,Burma,Android 4.3,EMUI 1.6,05021KQN) 480.79 MB
Download – http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter…
G6-C00 Board Software (TMB01010,Burma,Android 4.3,EMUI 1.6,05021GYK) 683.68 MB
G615-U10 Board Software (M004007,Burma,Android 4.3,EMUI 2.0 Lite,05021LQY) 480.34 MB
G630-U00 Board Software (M001012,Burma,Android 4.3,EmotionUI 2.0 Lite,05021KRV) 489.13 MB
G730-C00 Board Software (M1001010,Burma,Android 4.1.2,EMUI 1.0,05021MUR) 275.84 MB
လိုအပ်တဲ့ Model တွေကို easyfirmware.com ကနေ down
Credit : xda
Refer >>> Thethtwe
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/20/2016 10:58:00 pm4comments
♪ Android ဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Google Playstore Error Code များနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းများ ♫
Android ဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Google Playstore Error Code များနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းများ
ကိုယ်က Playstore က appliction ၁ခု download လုပ်တဲ့အချိန် Error message တွေ ကျလာပြီး Download လုပ်လို့မရတဲ့ အဖြစ်မျိုး စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်ရင်အောက်က Error Code နဲ့တိုက်ပြီး ဖြေရှင်းနည်းအတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
1. Google Playstore Error DF-BPA-09 (Error Processing Purchase)
ဒီErrorက applicationတခုက်ိုDownload လုပ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ဖုန်း Settings > Application > All > Google Service Framework > Clear Data လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ...
2. Google Play Store Error Code 194
ဒီErrorကလဲGameတို့ Application တို့download လုပ်တဲ့ အချိ်န်အဖြစ်များပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ဖုန်း Settings > Applications > All > Google Play Store > Force Stop ပြီးရင် Clear Data လုပ်ပါ။
ပြီးရင်Google Service Framework > Clear Dataလုပ်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
4. Google Play Store Error Code 941
ဒီ Errorက Google Playstore ကို update လုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်ပြီးအဖြစ်များပါတယ်
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ဖုန်းSettings > Apps > All > Google Playstore နဲ့ Download Manager ကို Clear Data and Clear Cacheလုပ်ပြီး မှ Update ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ....
5. Google Play Store Error Code rh01
ဒီ Error ကတော့ account server နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်တက်တဲ့ errorမျိုးပါ။
ဖြေရှင်းနည်း ၁ ။ ။ ဖုန်းsettings > Apps > All > Google Play Store နဲ့ Google Service Framework ကို Clear data နဲ့ Clear cacheလုပ်ပါ။
ဖြေရှင်းနည်း ၂ ။ ။ Gmail account ကိုဖုန်းထဲမှ remove လုပ်ပါ ပြီးလျှင်ဖုန်းကို restartလုပ်ပြီး ပြန်တက်လာပါက Gmail account ကို Sign in လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
6. Google Play Store Error Code rpc:s-5:aec-0
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ဖုန်းSettings > Apps > All > Google Play Store > Clear Cache နဲ့ Uninstall Updatesလုပ်ပေးပါ။ Download Manager နဲ့ Google Service Framework ကိုတော့ Clear Cache ပဲလုပ်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
7. Google Play Store Error Code 504
ုဒီerror ကApp could not be downloaded due to an error နဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ဖုန်းSettings > Apps > All > Google Play Store နဲ့ Google Services Framework ကို Clear data and Clear Cache လုပ်လိုက်ပါ။ error ဆက်တက်နေပါက gmail account ကို remove လုပ်ပြီး ပြန်sign in လုပ်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
8. Google Play Store Error Code 491
ဒီError ကို Download and update impossible ဖြစ်တဲ့ error လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ Gmail Account ကို Remove လုပ်ပြီး ဖုန်းကိုrestartလုပ်ပါ။ စက်ပြန်တက်လာတာနဲ့ account ကို sign in ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
9. Google Play Store Error Code 498
ဒီ Error ကိုတော့ Interruption Of Downloads လိုခေ့ါ်ပါတယ်။Download လုပ်နေရင်းနဲ့ မကြာခဏတက်တဲ့ errorပါ။
ဖြေရှင်းနည်း ၁ ။ ။ ဖုန်းထဲမှာ Cache file တွေပြည့်နေရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သိပ်မသုံးတဲ့ application နဲ့ မလိုတဲ့ file တွေကိုဖျက်လိုက်ရင်အစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ၂ ။ ။ ဖုန်းကို power ပိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Recovery mode ထဲကို Volume Down+Power+Home buttonတွေနှိပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ Recocery Mode မှာ Optionsတွေအများကြီးရှိပါတယ် ရှိတဲ့ optionsတွေထဲက Wipe Cache Partition ကို Volume buttonနဲ့သွားပြီး power keyနဲ့ selectလုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အဆင်ပြောပါစေ...
10. Google Play Store Error Code 919
ဒီErrorကတော့ applicationကို download လုပ်လို့တော့ရမယ် ဒါပေမဲ့Download လုပ်ပြီး Runလို့မရတဲ့errorမျိုးပါ။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ရိုးရှင်းပါတယ် သင့်ဖုန်းရဲ့Storage ပြည့်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ပါတော့ ဒီတော့ မလိုအပ်တဲ့ data fileတွေကို ဖျက်တာတို့ Sdcardထဲ move လုပ်လိုက်တာတို့ လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အဆင်ပြေပါစေ...
11. Google Play Store Error Code 921
ဒီErrorကတော့ aplicationတွေ download လုပ်ခါနီးမှာ အဖြစ်များတဲ့ error ပါ။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ Google Play Store ကို Clear data / Clear Cache လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် gmail account ကို removeလုပ်ပါ။ ဖုန်းကို Restart လုပ်ပြီး ပြန်တက်လာမှ Account ကို sign in လုပ်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
12. Google Play Store Error Code 923
ဒီError ကတော့ Sync ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်နေပြီး cache memory မလုံလောက်ရင်ဖြစ်တာများပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ ပထမဆုံး gmail accout ကို remove လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် စက်ထဲက မလိုပဲ memory စားနေတဲ့ application တွေ ကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ recocery mode ထဲ သွားပြီး Wipe Cache partition ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ စက်ပြန်တက်လာရင်တော့ gmail sign in လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အဆင်ပြေပါစေ...
13. Google Play Store Error Code 101
ဒီErrorကတော့ ဖုန်းstorage memory မလောက်တဲ့အတွက်အဖြစ်များပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ မသုံးတဲ့ applicationတို့ Dataတို့ကို Sdcard ထဲ့ပြောင်းတာတို့ delete / uninstall လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အဆင်ပြေပါစေ...
14. Google Play Store Error Code 481
ဒီ Error ကတော့ Google Play Store Account Error လို့ခေါ်ပါတယ်။Gmail errorလို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ Gmail account ကို remove လုပ်ပြီး အခြား account တခုနဲ့ sign in ဝင်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ...
15. Google Play Store Error Code RPC:S-3
ဒီ Error ကတော့ application downlaod လုပ်လို့မရတဲ့ error အမျိုးစားထဲပါပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း ။ ။ Gmail Account ကို remove လုပ်ပြီး တခြား account နဲ့ sign in လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Error Code တွေကတော့ XDA FORUM မှာ DISCUSSION လုပ်တာအများဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ CODE တွေဖြစ်ပြီး တင်ပေးထားတာပါ။
Taunggyi Mobile Family
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/17/2016 07:11:00 pm0comments
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို (Funny )ရယ်စရာဟာသပုံလေးတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် -Face Changer v10.6 APK
Android ဖုန်း Tablet ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီApplication လေးကိုတော့ ပုံတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ သဘောပေါက်ကြပါမှာ။ ဓါတ်ပုံ များကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဟာသပုံလေးတွေဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Application လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဟာသပုံတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Effect ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ မျက်လုံး ၊ မျက်မှန် ၊ နှုတ်ခမ်း ၊ ပါးစပ် ၊ သွား ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး အစုံအလင်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။ဒီကောင်းလေး၏ ဖိုင်းဆိုင်လေးကတော့9.3MB ဖြစ်ပြီး Android OS 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/17/2016 07:06:00 pm0comments
♪ တခြားသူမသိ​အောင်​ ဗွီဒီယို ခိုးရိုက်​ချင်​သူများအတွက် - Secret Video Recorder Pro v3.1.6 Apk (12-March) ♫
မိမိတို့ဖုန်း​လေးထဲက​နေ တခြားသူမသိ​အောင်​ ဗွီဒီယို ခိုးရိုက်​ချင်​သူများအတွက်​ အသုံးဝင်​တဲ့ Application တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့..."Secret Video Recoder Pro v3.1.6" ကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါပြီဗျာ။ ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ လည်း အရှေ့အနောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကနေရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Video ရိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းလေးကိုချိန်ပြီးထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ရိုက်ယူမယ့်အချိန်ကိုလည်း Schedule လုပ်ပြီးသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အလိုလျောက်ရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ တင်တဲ့သူတော့သိပ်မ ရှိပါဘူး အသုံးတည့်စေမယ့် Application လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက် မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
- Full HD Mode ရုပ်​ထွက်​ပိုင်းကို (1920x1080)
- Custom icon ကိုလည်း​ရွေးခြယ်​ထားရှိနိုင်​ခြင်း
-ရိုက်​ကူးလိုက်​တဲ့ split video files ​တွေကို လည်း internal or external SD card ထဲသို့
​ရွေးခြယ်​ပြီး save လုပ်​ထားနိုင်​ခြင်း
- front and back camera အသုံးပြုပြီး ရိုက်​ကူးနိုင်​ခြင်း
- Advanced shutter mute options စနစ်​ ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ ရိုက်​ကူး​နေမှုကို တခြားသူ မသိ​စေနိုင်​ခြင်း
- Talk on the phone while video recording ဆိုတဲ့ ရိုက်​ကူး​နေစဉ်​မှာပါ ဖုန်းဝင်​လာ
ပါက ရိုက်​ကူး​နေမှုမပျက်​ပဲ ဖုန်းကိုလက်​ခံ​ပြောဆို နိုင်​ခြင်း
-Click တချက်​နှိပ်​ရုံဖြင့်​ လွယ်​ကူစွာ ရိုက်​ကူး အသုံးပြုနိုင်​​စေခြင်း...
စတဲ့ စွမ်း​ဆောင်​ရည်​​တွေ ပါရှိပါတယ်​။
​နောက်​ဆုံးထွက်​ ဗားရှင်းဖြစ်​တာမို့လည်းအသုံးပြုလို့​ကောင်းမယ့်​ features ​တော်​​တော်​​လေးပါဝင်​လာတာ ကို​တွေ့ရပါတယ်​-
★ Auto sync video with google drive to help you find your phone when you lost.
★ Protect videos by pattern lockscreen.
★ Show/Hide video from Gallery.
★ No camera shutter sound.
★ No preview.
★ Clean material design.
★ One touch to start/stop recording.
★ Support video orientation
★ Can record during phone call.
★ Turn screen off and continue recording in background mode.
★ Schedule to record video at specific time.
★ Supports front and back camera.
★ Full HD video (1920x1080) recording.
★ Easy to config duration, camera, and video quality.
★ Enable/disable notification, screen message when start/stop recording.
★ Check free storage before recording.
★ Easy to open folder containing recorded videos.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/16/2016 09:58:00 pm0comments
Android ဖုန်းတွေရဲ့ Pattern Lock , Password Lock , Other Lock တွေကိုဖျက်လို့ရတဲ့ Tool
ဖုန်းရဲ့ Pattern Lock , Password Lock , Other Lock တွေကိုဖျက်လို့ရတဲ့ Tool လေးပါ...
Size က - 10 MB ပဲရှိတယ်
Chan Myae Aung‎
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/16/2016 09:54:00 pm0comments
One Click Root AllDevices များစွာအတွက် ကလစ်တစ်ချက်...
COC နှင့်ပတ်သက်တာ အကုန်လုပ်ဆောင်နုိုင်သော COC Ai...
COC player တွေအတွက် X-mod မလိုပဲအမြဲတမ်း Trap တွေ ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ ပဋ္ဌန်း ၂၄ ပစ္စ...
Keyboard Style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပ...
Board firmware တင်နည်းမှာလိုအပ်တဲ့ Save brick firm...
♪ Android ဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Google Playstor...
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို (Funny )ရယ်စရာဟာသပုံ...
Android ဖုန်းတွေရဲ့ Pattern Lock , Password Lock ,...
Vivo ဖုန်းတွေကို Root မလိုပဲ COC မြန်မာစာသွင်းနိုင...
ဖုန်းကနေ CCTV or Webcam အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော- IP...
♪ Original ပါလာတဲ့ Apk တွေကိုဖျက်ထုတ်ပေးမယ့် - Roo...
Xiaomi Redmi Note2အတွက် အကောင့်ဆုံး Custom ROM >...
Android Version 5.0 နှင့်အထက် ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာ...
Android Phone မှာ အသံအရမ်းတိုးနေသူများအတွက်
How To Root Samsung Galaxy S7 and S7 Edge [G930/G9...
Install Apk as System Application[ need root acces...
Huawei G610-U00/C00 နဲ့ G730-U00/C00 အတွက် Google ...
Samsung Android Devices တွေ Root မလို Debug On မလိ...
Service သမားတွေ ဆိုင်သမားတွေအတွက် တစ်ခုတည်းနဲ့ ကိစ...
♪ LG, Lenovo, Sony Erisson နှင့် HTC ဖုန်းတို့၏ Ro...
Android ဖုန်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Camera Failed Error...
Huawei တွေကို PC ကနေ Firmware တင်တဲ့ Flash Tool
Lucky Patcher အသုံးပြုနည်း + Lucky Patcher Apk v3....
♪ Hacker တို့၏ထိုးဖောက်နည်းများနှင့် Hacker အန္တရယ်...
တင့်ကားလေယာဉ်ပစ်ဂိမ်း Heavy weapon [28.9 MB] [apk]...
ASUS Zenfone2ကို Root ဖေါက်ပြီး မြန်မာ Font သွင်...
♪ ဖုန်းပြောဆိုသမျှကိုအလိုလျှောက်မှတ်သားထားပေးမယ့် ...
♪ ပိုမိုရုပ်လုံးကြွတဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်ပြင်ဆင်လာမယ့် Me...
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android Application Icno (Logo) တေ...
လူကြိုက်များတဲ့ Hero နေရာကနေတိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် - ...
ဖုန်းမှာ Screenshot ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် - Screenshot...
ဖုန်းမှာ Icon ဒီဇိုင်းအလန်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့် - I...
ကရင်လူမျိုးတွေအတွက် ကရင်ဖေါင့် နှင့် ကရင်ကီးဘုတ် ထ...
Mobile Phone မျိူးစုံ Firmware ရေးသားနည်း PDF
နိုင်ငံတစ်ကာအလံတံဆိပ်တွေနဲ့ Profile တွေကိုအလွယ်တစ်...
အသည်းပုံလေးတွေနဲ့ ပုံတွေထည့် စာတွေရေးပြီ သော့ခတ်ထာ...